Filtrer les éléments par date : mardi, 14 décembre 2021
mardi, 14 décembre 2021 20:01
Ny teleferika, toy ny sarety alohan'ny omby
Androany ny ONE vao haka ny hevitry ny vahoakan'Antananarivo, raha efa voasonian'ny Filoham-pirenena tamin'ny 20 septambra 2021 ny fitrosana izany vola izany tamin'ny Frantsay, sady natao tsy re tsaika, indray andro dia vita, tsy ny Malagasy rehetra mpandoa trosa koa amin'io no anontaniana ny heviny fa ny vahoakan'Antananarivo ihany.
Dia ny vahoakan'Antananarivo ihany angaha no mibaby sy manefa ilay trosa ?
Tsy hita soritra rahateo any anatin'ny Teti-bolam-panjakana 2022, izay vao nolanian'ny Parlemanta.
151 000 000euro x 4300ar = 650 miliara ar
Raha notsinjaraina 20 miliara ar isaky ny Faritra 23 dia mbola 460 miliara ariary ny totaliny. Nefa izao zara raha 2 miliara ar monja no omena ny Faritra.
Efa tsy resahantsika intsony ilay kianja Barea, efa vita izy iny.
mardi, 14 décembre 2021 17:40
Tetikasa TELEFERIKA : Naka ny hevitry ny Vahoaka ny ONE
Nampahafantatra sy naka ny hevitry ny vahoaka an'Antananarivo, izay voakasika mivantana amin’ny Tetikasa TELEFERIKA Antananarivo, ny Office National pour l’Environnement na ONE.
Notanterahina tetsy amin’ny Kianja Mitafo Mahamasina androany, ny fampandraisana anjara ny vahoaka ny fanombanana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy ity tetikasa izy.
Tsiahivina fa tsy nitsipaka ny hanatanterahana io tetikasa io ireo mpanolontsain’ny tanàna, izay olomboafidy solontenam-bahoaka eto Antananarivo Renivohitra.
Malagasy Mpilaravinahitra : Manodidina ny telonjato eo voatana am-ponja any amin’ny tany Arabo
Teratany Malagasy miisa 180 eo, izay mila ravinahitra any Koweït no fantatra izao fa any am-ponja. Maherin’ny 100 ny any Arabie Saodita, ary 5 kosa any Oman.
Noho ny tsy fahampian’ny taratasy (Visa, passeport…) no voalaza fa antony hitazonana azy ireo any am-ponja hatreto. Nanambara ihany koa izy ireo fa tsy nangalatra ary tsy nanao hadisoana.
Miantso ny fitondram-panjakana izy ireo, hijery vahaolana manoloana izany.
mardi, 14 décembre 2021 17:28
Tetibola- panjakana 2022 : Nankatoavin’ireo depiote ny fanitsiana nataon’ny Loholona
Nodinihina fanindroany, ny alatsinainy 13 Desambra 2021 teny amin’ny Lapan’i Tsimbazaza, ny volavolan-dalàna laharana faha-018/2021 tamin’ny 27 Oktobra 2021 momba ny Làlana mifehy ny Fitantanam-bolam-panjakana, ho amin’ny taona 2022, rehefa avy nasiam-panovana avy tamin’ireo Loholona.
Nankatoavin’ireo Solombavambahoaka nandritra izany ny fanesorana ny vola 200 miliara Ariary izay natokana hanaovana « garantie à l’importation des PPN » izay misoratra ao amin’ny rubrique « Transferts », ary ho hafindra amin’ny rubrique « Biens et services » izay ao anatin’ny teti-bolan’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola ihany.
mardi, 14 décembre 2021 17:27
Solombavambahoaka : Hanao fanadihadiana momba ny fiakaran’ny PPN
Nankatoavin’ireo Solombavambahoaka ny Alatsinainy 13 desambra ny Tolo-pehin-kevitra laharana faha-008 -2021/PR entina manangana ny vaomiera mpanao fanadihadiana momba ny fiakaran’ny vidim-bary sy ireo entana ilaina andavanandro, ary ny fitaovana fanorenana izay natolotry ny Solombavambahoaka Idealson.
Ny ampihimamba ataon’ireo mpandraharaha sasany no nahatonga azy ireo hanangana vaomiera mpanadihady ity, mba hahafantaran’ny mpanjifa ny tena vidin’entana tokony ho jifaina.
Raha ny Faritra Atsimo Andrefana no voalaza hanaovana ny fanadihadiana, araka ny tolo-pehin-kevitra dia nanapaka ireo Solombavambahoaka fa hitarina manerana an’i Madagasikara izany fanadihadiana izany.